DAAWO:Musharax Faarax Cali Shire oo Gaas waxba u reeban & Puntland oo…. – Puntlandtimes
DAAWO:Musharax Faarax Cali Shire oo Gaas waxba u reeban & Puntland oo….
GAROWE(P-TIMES)- Musharax Faarax Cali Shire kamid ah siyaasiyiinta u tartamaysa xilka madaxweyne ee Puntland ayaa si adag u weeraray Madaxweynaha Puntland Dr. C/wali Maxamed Cali Gaas oo muddo kooban ay uga hadhay xilkiisa. RIIX HALKAN OO KA DAAWO MUUQAALKA
Faarax Cali Shire ayaa nasiib daro ku tilmaamay in laba wareegto ay soo wada saaraan Gaas iyo ku xigeenkiisa isla markaasna ay tusaale u tahay arintaasi khilaafka Gaas iyo Camay heerka uu haatan gaadhsiisan yahay.
Xaalada Puntland, arimaha amaanka iyo dhaqaalaha Puntland ayuu ka hadlay musharaxu, waxaana uu sheegay in xukuumadda Gaas ay gaadhsiisay Puntland meeshii ugu hoosaysay dhanka dhaqaalaha oo dhaqaale bur bur ay galisay wadanka.
http://puntlandtime.com/2018/12/daawomusharax-faarax-cali-shire-oo-gaas-waxba-u-reeban-puntland-oo/RIIX HALKAN OO KA DAAWO MUUQAALKA
Inta Gaas xukunka qabtay Ganacsatada iyo aqoonyahanka Puntland waa ka guurahayaan magaalooyinka Puntland gaar ahaan Bosasso iyo Gaalkacyo amaanxumo jirta.
Dhaqaalaha Puntland eber(cero) waaye waxaana taas keenay Cabdiweli Gaas.
Madaxweyne Faarax Cali Shire musharaxa qura runta sheegahaya. Musharaxa haysta tageerada ummada.
Dhaqaalo? Ina Cali Shire malaha Tv-ga ma daawado? Miyaanu arag waxa France ka dhacaya? Miyaanu arag in Mar dhow ay Maraykan taas oo kale ka bilaamanayso? Miyaanu arag in virus kii Arab spring uu Europe gaaray hada?
Huu-haa waxaan ahayn meesha kuma hayaan huwantaan beenta isku bahaysatay. Somali oo dhan wey ogyihiin waxa puntland u qabsoomay iyo waxa aan u qabsoomin iyo waxa khaldamay iyo waxa aan khaldamin. Wax qarsoona ma jiraan. Wax qarsoon meesha ma yaalaan ee musharaxiintu hanoo sheegaan oo hasoo bandigaan waxay ay dheer yihiin Gaas oo ay puntland kusoo kordinayaan oo u qabanayaan. In ay xabaala qufaan wakhti tagay ma ahee — ma arkaysid musharax balan-qaadaya waxuu u qabandoono puntland. Gaas waa la qiyaasi karaa wax qabadka uu la imaan hadii mar labaad la doorto. Taasu cidna kama qarsoona. Gaalada ayaa ku maahmaaha
” jin-kaad taqaanid ayaa ka fiican jinka aadan aqoon”
Hadii dhamaantood wada jin yihiin— axsan Abdiweli Gas— sababtoo ah waa jin meel loo raaco leh oo taariikhdiisa la ogyahay waxa laga fili-karana la qiyaasi karo.